Waxaad fursad u heleysaa in aad hal tallaab u qaaddid ama u laabatid suuqa shaqada, isla mar ahaanta uu shaqabixiyuhu mushaarkaaga u helayo taageero dhaqaale.
Haddii uu naafanimo awgeed karaankaaga shaqadu uu hooseeyo waxaad heli kartaa shaqo duruufahaaga la waafajiyay. Isla mar ahaantaas wuxuu shaqabixiyahaagu mushaarkaaga u heli karyaa kaalmo lacageed.
In aad u shaqeysid Samhall waxay fursad kuu siineysaa in aad horuumarisid karaankaaga shaqada iyo kartidaada aqoon- iyo xirfadeed. Inta aad u shaqeyneysid waxaad heleysaa taageero iyo gacan qabasho.
Shaqo lagu waafajiyay adigaaga naafada ah.